बहुविबाह र महिला हिंसा-Nagarikaawaj.com
बहुविबाह र महिला हिंसा
भनिन्छ महिला धर्ती हुन महिलाले धेरै कुरा सहन सक्छिन् । यी घरतीले सबैकुरा सहन सकेपनि आफ्ना श्रीमानसँग अर्की महिला सौताको रुपमा आउछिन् भने उनले सो कुरा कदापि सहन सक्दिनन् ।
सौता भन्नु महिलाको लागि मुटुमा रोपेको कीला सरह हो भन्ने गरिन्छ । यस्तो हुनुका पछाडी पनि धेरै कारणहरु हुन्छन भन्ने भनाइ सुन्न पाइन्छ सौता भित्रिएपछि श्रीमानबाट हेला गर्ने, परिवारबाट, सौताबाट हैरानी खेप्नुपर्ने, सास्ती भोग्नुपर्ने, भेदभाव र दुःख र बिभिन्न यातनाहरु खेप्नु पर्ने भुक्त भोगी महिलाहरुले बेलाबेलामा न्यायका लागि पहल गरिदिन गरेको आग्रहलाई लिन सकिन्छ ।
नेपाली समाजमा महिलाले सन्तान जन्माउन नसकेको, छोरा पाउन नसकेको, महिला बौलाएको वा कुनै निको नहुने रोग लागेको र कतिपयले त कुनै समस्या नभएपनि सौता ल्याउने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनमा महिलाले विवाह गरेको १० वर्षसम्म निःसन्तान भएमा, बौलाएमा, निको नहुने रोग लागेमा, हिडन नसक्ने गरी कुँजी भएमा वा अंशवण्डाको महल १० को (क) बमोजिम स्वास्नीले अंश लिई एक्लै बसेमा, दुबै आँखा नदेख्ने गरी अन्धी भएमा, ३ वर्षसम्म श्रीमानसँग सँगै नबसी एक्लै बसेको खण्डमा पुरुषले दोस्रो विवाह गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।
तर महिलाको हकमा पुरुष कस्तो अवस्थामा महिलाले दोस्रो विवाह गर्न पाउछे भन्ने बारेमा भने कानून मौन छ । यहाँ पनि महिला भएकै कारण विभेद गरिएको छ । पुरुषले कानूनमा गरेको प्रावधानलाई वेवास्ता गरी आफूलाई मन पर्ने महिला वा केटीसँग सम्वन्ध गाँसी दोस्रो विवाह गरी भित्रायाउने चलन बढ्दो अवस्थामा छ ।
बास्तवमा ‘दुई जोइको पोइ कुना बसी रोई’ भन्ने उद्यान टुक्कालाई सत्य थाहा पाउदा पाउदै पनि थुप्रै सज्जन पुरुषहरु अनेक बाहानामा दोस्रो विवाह गर्छन् र जेठी श्रीमतीप्रति हिंसा र दुरव्यवहार गर्ने खान लगाउन नदिने, कुटपिट गर्ने, घरबाट निकाल्ने जस्ता हिंसात्मक व्यवहार गर्छन् । कतियपले घरमा श्रीमती छोराछोरी हुँदाहुादै पनि ललाई फकाई विवाह नभएको भन्दै मायाजालमा फसाई विवाह गर्ने र बाहिर कोठा खोजेर राख्ने र पछि विचल्ली बनाएर भाग्ने गरेको स्थिती पनि पाइन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने धेरै महिलाहरुले बहुविवाहको कारणबाट श्रीमान, घरपरिवार र समाजबाटै विभिन्न खालका हिंसात्मक व्यवहारसँग पौठेजोरी खेलिरहनु परेको अवस्था तपाइ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।
हुन त कानूनले बहुविवाहलाई दण्डनीय मानेको छ तर त्यो कानून खाली नाम मात्रको कानूनको रुपमा रहेको छ महिलालाई झुक्काउने र ललिपप दिएर फकाएजस्तै छ बहुविवाहको कानून ! बहुविवाहपछि जेठी श्रीमती मात्र होइन उनी पट्टीका सन्तान अर्थात छोराछोरी पनि हिंसामा परेका हुन्छन , उनका बाबुले गरेको गल्ती छोरा छोरीले भोग्नु परिरहेको हुन्छ ।
महिलाहरुमा सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा पहँुच नभएका कारण त्यही श्रीमानसँग आश्रित भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ महिलाहरुलाई । यस्तो खालको असमान अवस्थालाई हटाउनका लागि दरिलो कानून बनाइनुपर्छ त्यो कानून बहुविवाह गरेपनि बदर हुने खालको कानून बनाइनुपर्छ । अन्यथा बहुविवाहले महिलाहरुलाई शारिरीक र मानसिक रुपमा सधै विक्षिप्त बनाइरहने छ । हाल रहेको बहुविवाह सम्बन्धी मौजुदा कानूनले बहुविवाह गर्ने पुरुषलाई डामेर छाडेको साढेलाई झै छाडेको छ । दरिलो कानून बन्न नसक्दा लोग्नेलाई दण्ड सजाय दिने पक्षमा महिलाहरु पनि स्वयं हुदैनन् ।
महिलाहरुले कानूनमाथि कम भरोसा र आफूले न्याय पाउने कुरामा ढुक्क हुन नसक्दा र बहुविवाहका घटना घटाउने व्यक्ति विरुद्ध अत्यान्त्यै कम मुद्धा अदालतमा जाने गर्दछन् । अदालतमा पुगेको केशहरु मध्येका महिलाहरुले पनि सोचेजति न्याय पाउन नसक्दा महिलाहरु झनै हिंसामा परेका छन् ।
समाजले समेत महिलालाई उल्टै विभिन्न किसिमका गाली गलौज गर्दे गाउँबाट निकाल्ने श्रीमती भएर श्रीमानको सतमा बस्न नसक्ने भन्ने आरोप समेत पीडित महिलाहरुले सहनु पर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।
वास्तवमा बहुविवाहका घटनाहरु पनि प्रतिष्पर्धामा देखिन थालेको अवस्था । कतिपय पुरुषको घरमा छोराछोरी श्रीमति नातिनातिनी हुँदा हुँदै पनि अर्के अर्काकी श्रीमती भित्राएका उदाहरणहरु देख्न पाईन्छ ।
ति पुरुषलाई यत्ति पनि हेक्का भएन म छोराछोरी, श्रीमती सपरिवार भएको मान्छेसँग यसरी सजिलै आउने महिला मलाई छोडेर यसरी नै सजिलै अर्केसँग जानसक्छे भन्ने अडकल किन राख्न नसकेको होला ? पुरुषले मात्र होइन महिलाले पनि श्रीमती, छोराछोरी सबै हुँदा हुँदै मलाई बिवाह गर्न मम्सिने मान्छे अर्थात पुरुषले म जस्ता त कति महिलाहरुलाई ल्याउछ, ल्याउँछ भन्ने कुरा किन ख्याल गर्न नसकेको होला ? यी यस्ता ख्याल गर्न नसक्दा बहुविवाहले विभिन्न खालका हिंसाहरु निम्त्याएको छ । त्यस कारण बहुविवाहका कारण हुने महिला हिंसालाई अन्त्य गर्नको लागि बहुविवाहलाई सदर होइन बदर हुने खालको कानूनको निर्माण गर्न जरुरी छ यसका लागि सबै तह र तप्कादेखि जाग्नुपर्छ लाग्नु पर्छ ।